Monday, April 12, 2010 Sunday, October 4, 2015 Michael Reynolds kwuru
Onye ọ bụla ma m nwere ike mara na abụ m onye ofufe Ngwa Google. Nkọwa zuru ezu, SpinWeb bụ a Ntugharị Google nyere ikikere, yabụ ntinye anyị na ngwaahịa a doro anya. E nwere ọtụtụ ezi ihe mere obi ụtọ banyere Google égwu, Otú ọ dị… karịsịa dị ka a obere azụmahịa.
Ngwa Google bụ n'ezie a dochie anya Microsoft Office. Mgbe m na-agwa ndị mmadụ nke a, mgbe ụfọdụ ha na-enwe obi abụọ, ọ bụ ya mere m ji eme ya dum nzukọ ọmụmụ na isiokwu iji mee ka ìhè dị na isiokwu ahụ. Azụmaahịa nke na-awụlikwa elu na ngwa Google ga-etinye aka na akụrụngwa nke gụnyere email, calendaring, njikwa akwụkwọ, nzukọ vidiyo, na njikwa kọntaktị nke na-asọmpi Microsoft Exchange na obere ego. Ka anyị lee anya.
Email Google: Nhọrọ dị ike iji gbanwere
Email na Ngwa Google bụ Gmail anyị niile maara ma hụ n'anya. Agbanyeghị, ngwa Google na-enye gị ohere ịme aha email gị na ngalaba aha ụlọ ọrụ gị iji hụ na ejiri akara ya. Ọ dịghị onye chọrọ iji email nke ndị ahịa maka azụmaahịa, nri? Ngwa Google bụ Gmail maka azụmaahịa, yana gụnyere ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dịka nzacha spam na-agbakwunye na iwu mgbakwunye. Ọ gụnyekwara ngwa ọrụ Mbugharị nke na-eme ka ọ dị mfe ịkwaga na Exchange. Enwere ike ịnweta email site na weebụ, ndị ahịa email (dị ka Outlook ma ọ bụ Apple Mail), yana ngwaọrụ mkpanaaka. Ihe ndabara maka onye ọrụ ọ bụla bụ 25GB, nke na-emesapụ aka.
Na mgbakwunye, nzacha spam na nje virus na email Google bụ ihe kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Anaghị m ahụkarị nkwupụta ụgha na-ejide ma kpochapụ ọtụtụ email ndị na-achọghị. Vingkwaga na Google Apps na-ewepụ mkpa ọ bụla maka nzacha nzacha ndị ọzọ.
Ijikọta Dị Ka Nnukwu Bomụ nwoke
The calendaring atụmatụ na Ngwa Google dị ịtụnanya. Ndị na-ahazi nwere ike ịhazi nzukọ na mmadụ na akụrụngwa (dịka ụlọ nzukọ, ndị na-arụ ọrụ, wdg.) Ndị otu egwuregwu nwekwara ike ịlele usoro ọrụ ndị ọzọ ma hụ ozi na-akwụghị ụgwọ / na-arụsi ọrụ ike. Nke a na-eme nzukọ nzukọ ịhazi nzukọ n'ime nzukọ. Enwere ike iziga ncheta nzute site na email ma ọ bụ ozi ederede ma onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịhazi ya.
A Full Office Suite na ígwé ojii
Enwere m obi anụrị maka ụdị Docs nke ngwa Google. Imirikiti ụlọ ọrụ na-eji Okwu, Excel, na PowerPoint arụ ọrụ dị ka sọftụwia ndabara ha. Nke a pụtara ịwụnye ngwanrọ na kọmputa niile, yana ịkwado ma debe ya. Nke a nwere ike ịdị ọnụ. Ihe a niile nwere ike ịga na Google Docs. Ndị otu nwere ike ịchekwa akwụkwọ niile n'otu ebe ma hazie ha n'ụzọ ụfọdụ dị oke egwu.
Ihe dị mma gbasara Google Docs bụ na ọ na-ewepụ nkụda mmụọ nke "onye nwere ụdị akwụkwọ ọhụrụ ahụ?" Site na Google Docs, edere akwụkwọ niile ozugbo na sistemụ ma enwere naanị otu akwụkwọ nke akwụkwọ ọ bụla enyere n'oge niile. Ndị ọrụ nwere ike imekọrịta na akwụkwọ ma mee mgbanwe na nyocha niile ka ị nwere ike ịlaghachi na nsụgharị ndị gara aga wee hụ onye mere ihe.
Ndị na-ahazi nwere ike itinye ọba akwụkwọ ha dum na Docs Google ma gaa 100% enweghị akwụkwọ ebe ọ bụ na ịnwere ike bulite ụdị faịlụ ọ bụla. A ga-agbanwe ya ka ọ bụrụ Google Doc nwere ike idozi ya ma ọ bụ echekwa ya na sava faịlụ ahụ. Ihe Google Docs na-enye gị ihe nkesa faịlụ, draịva ejiri, yana ọfịs ụlọ ọrụ n'otu n'otu na-enweghị ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ ị ga-echegbu.
Nweta Google na Google Chat
Ọzọ mma mma nke Ngwa Google bụ vidiyo nkata atụmatụ. Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na kamera nwere ike itinye aka na nnọkọ mkparịta ụka vidiyo na onye ọrụ ọzọ iji mee ka mmekọrịta dị mfe. Qualitydị dị mma ma ị nwere ike ịnwe nzukọ ọzọ na ndị ọrụ Google ndị ọzọ na ụlọ ọrụ gị. Ọ bụghị dị ka fancy dị ka ụfọdụ nke enterprise video conferencing ngwọta ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma na bụ oké ihe ngwọta maka ọtụtụ ọrụ.
Ndị Ọrụ Mobile
Ọrụ niile dị na Ngwa Google rụọ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka. My iPhone kalenda na synced enweghị nsogbu na m Google Kalinda na m nwere ike sere n'elu ọ bụla akwụkwọ na ekwentị m, dị ka mma. Enwere m ike idezi akwụkwọ site na ekwentị m! Ihe nke a pụtara bụ na m ga-ebu niile nke akwụkwọ ụlọ ọrụ m na m ebe ọ bụla m na-aga. Eeh, nke ahụ bụ eziokwu - akwụkwọ niile dị n’ụlọ ọrụ m nwere ike ịnweta na ekwentị m. Email na-arụ ọrụ na-enweghị nhịahụ ma na-eme ka ọ dị mfe iji kparịta ụka n'okporo ụzọ.
Nche nke Igwe ojii
Otu kachasị mma ahịa nke Google Apps bụ eziokwu na ọ chọghị itinye ego nke ngwaike iji gbaa. A na-akwado ihe niile na ebe data Google ma interface ahụ ezoro ezo na SSL. Nke a abụghị naanị ịchekwa nnukwu ego, mana ọ na-eme ka nzukọ gị gbanwee karịa. Ndị ọrụ nwere ike ịbanye na sistemụ ahụ site na ebe ọ bụla, ịkwaga ọfịs na-adịwanye mfe, data gị dị nchebe karịa ka ọ ga-adị n'ọfịs gị. Ọ na-amasị m ịkwa emo na ọfịs anyị nwere ike gbaa echi na anyị nwere ike ọ gaghịdị achọpụta n'ihi na sistemụ anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Nhọrọ Dị Mma Maka Ndị Na-ahazi
Businessdị azụmahịa nke Ngwa Google na-efu $ 50 kwa onye ọrụ kwa afọ ma nwee ike melite ngwa ngwa. Emegoro m akaụntụ ma mee ka ndị ahịa m rụọ ọrụ n'ime ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu nkwukọrịta na sistemụ gị ugbu a, ọ ga-amasị ịga akwụkwọ na-enweghị akwụkwọ, ọ dị mkpa ka gị na ndị otu egwuregwu rụkọta ọrụ karịa, ma ọ bụ chọọ ịmalite ịchekwa ego na sọftụwia ọfịs gị, M ga-agba gị ume ka ị nye Google Apps a na-agbalị.
Biko mee ka m mara ma m nwere ike inye aka. Ọ ga-amasị m ịnụ ahụmịhe gị na ngwa Google, yana, yabụ biko biko kwuo okwu n'okpuru!
Tags: DocuSignChọọ MarketingSliderỌgba Weebụ
Amen. Anyị na-elekọta ụlọ ọrụ anyị dum (http://raidious.com) na Google Apps, anyị enwebeghịkwa nsogbu ọ bụla - ahụmịhe mara mma. Ọ dị m ka ya bụrụ na ha ga-arụ ọrụ njikwa ọrụ / arụ ọrụ yana ihe ọrụ CRM iji soro ya!
N'ezie, TactileCRM na-esonye na Google Apps site na Ahịa 🙂
Ana m akwado Google Apps maka ndị ahịa m niile, n'agbanyeghị nha. Enweela m ha maka ọtụtụ n'ime ha ka m wee lelee usoro Reseller Ikike. Otu n'ime ihe ndị mara mma m chọpụtara na Bochum na MediaTemple bụ na m nwere ike ijikwa ntọala DNS niile na onye ọbịa. Ngalaba m na-edeba aha ebubo maka ntọala DNS ọ bụla dị elu, yabụ echekwara m ego ole na ole n'ebe ahụ.
Diito! Ahapụrụ m Outlook na Jenụwarị 1, 2010. Ọ bụ mkpebi siri ike na mkpebi azụmaahịa ịme ya. Agara m Google Apps niile na echeghị ya ma ọlị. Mụ onwe m na-agba ndị ahịa m niile ume ka ha gaa "GOOGLE" - nwere ezi uche n'ọtụtụ ụzọ ịme ya.